Sida Loo Jeeriyo jeermiska Daloolinta Caloosha - Qaad Tilmaamahan | Bezzia
Susana godoy | 09/06/2021 12:00 | Quruxda
Ma taqaanaa sida jeermiga loogu dilo dillaaca xudunta? Sababtoo ah waa mid ka mid ah shakiga weyn ee inagu soo food leh marka aan god ka sameyno jirka iyo in ka badan, mid ka mid ah sida xuddunta, in wasakh ku filan ay ku urursato xitaa haddii aynaan rabin. Marka, maanta waxaad ka bixi doontaa dhammaan shakigaas suurtagalka ah.
Si loo muujiyo, waa inaan marwalba raacnaa talooyin taxane ah. Dhammaantood waxay ka hortagi doonaan infekshinku faafo oo wuxuu noo oggolaanayaa inaan muujino dahabkeenna sida ugu dhakhsaha badan. Haa runtii, sidoo kale isku day inaad raacdo tilmaamaha uu bixiyay xirfadlaha inaan kuu sameeyay maxaa yeelay hadda waxaan ka bilaabaynaa kuweenna.
1 Maxaan sameyn karaa si aan jeermiska uga mudo mudis
2 Sidee loo bogsadaa daloolinta xuddunta
3 Sidee loo ogaadaa haddii cirbadda xuddunta ay cudur leedahay
Maxaan sameyn karaa si aan jeermiska uga mudo mudis
Waxaan hore u soo marnay in daloolinta xuddunta ay xoogaa dhib badan tahay in laga ilaaliyo infekshanka. Wax kasta oo ka sii badan maxaa yeelay waa aag wasakhda ku urursanayso il biriqsi ah. Marka waxaan u baahanahay inaan fiiro gaar ah u yeelano oo waxaan ku celcelin doonaa howsha dhowr jeer maalin kasta.
Haddii aad taabaneysid dhaawaca, waa inaan si fiican ugu dhaqno saabuun iyo biyo. Laakiin kan aan ku jirin barafuun laakiin ka fiican in la doorto mid dhexdhexaad ah.
Aagga laga hadlayo, sidoo kale waa lagama maarmaan ku dhaq biyo yar iyo saabuun fudud. In kasta oo cusbada jir ahaaneed sidoo kale la muujiyey. Waa inaan ku buufinaa, hubinaa inay si fiican u qoyso daloolka.
Markay tahay nadiifinta, Waad dhaqaajin kartaa daloolinta laakiin taxaddar weyn oo kaliya in kor loo qaado ama hoos loo dhigo, markaa ma jiro wax qolof ah oo u dhexeeya. Maalmaha ugu horreeya waa inaan hubinno sababtoo ah waa marka aan aad ugu baahan nahay.
Markaanu nadiifino, waxaan u baahanahay inaan qalajino aagga laakiin ma isticmaali doonno tuwaallo ama wax la mid ah. Laakiin si fiican u faashad una siiso taabasho yar oo jilicsan, iska ilaalinta jiidista, maxaa yeelay way nagu dhibaysaa.
Sidee loo bogsadaa daloolinta xuddunta
Tallaabooyinka aynu soo sheegnay ka sokow, had iyo jeer waxa jira wax kale oo ay tahay inaynu xusuusano maxaa yeelay sidaas oo kale ayey muhiim u yihiin. Marka, haddii aad ka yaaban tahay sida loo bogsiiyo daloolka xuddunta, markaa waa inaad ogaataa dhammaan waxyaabaha soo socda:
Ka dib marka la maydho oo la nadiifiyo, sidoo kale waa ku habboon tahay in la mariyo jeermis dilaha, si looga hortago infekshannada ka dhalan kara. Laakiin waligaa khamri ha ugu isticmaalin nabarka.
Iyada oo ul dhegta ah oo qoyan biyo diirran, waad jilcin kartaa qolofta marmarka qaarkood muuqata. Halkii aad jiidi lahayd oo naga dhigi lahayn nabar weyn, had iyo jeer way fiicantahay inaad raacdo talaabadan si aad uga saarto si fudud.
Ha ka saarin daloolinta. Waa inaad u dhaqaaqdaa sidaan soo sheegnay, laakiin had iyo jeer ku dhaaf meesha haddii uusan dhakhtarku kugula talin si kale.
Waxaan ka hadlaynaa nabar inta badan waqti qaata si uu u bogsado. Marka waa inaad sugto labo ama seddex isbuuc ka hor intaadan aadin barkadda oo haddii aad aado, waxaa ugu wanaagsan in la daboolo inta ugu badan ee suurtogalka ah, lagana ilaaliyo ilaa inta suurtagal ah koloriin.
Sidoo kale ha ku xidhin dhar aad u adag aaggan, kaas oo xoqin kara jajabka ama xitaa wuu qaban karaa. Sababtoo ah jerks ma fiicna inta lagu jiro habka bogsashada.
Sidee loo ogaadaa haddii cirbadda xuddunta ay cudur leedahay
Waa run in qof walba uusan ku yeelan doonin falcelin isku mid ah. Laakiin haa, markaan ka hadlayno infekshinka daloolinta, waxaan caddeynaynaa inay jiraan calaamado taxane ah oo ay tahay inaynaan iska indhatirin.
Badhanka caloosha ayaa ka casaan badnaan doona sidii caadiga ahayd. In kasta oo ay run tahay in maalmaha ugu horreeya ay noqon karto iyo infekshan la'aan.
Waxaad ku arki doontaa kuleyl badan aagga oo waxaad arki doontaa xoogaa caabuq ah.
Sidoo kale, markaad taabatid way dhaawici doontaa oo malaxdu way bilaaban doontaa si aad u sameysid muuqaal.
Xaaladaha aadka u daran, waxay ku siin kartaa qandho yar, laakiin xaqiiqdii maahan wax caadi ah. Hadday sidaas tahay, markaa waa inaad la tashataa dhakhtarkaaga.
Waqti kasta waa inaad yeelataa dulqaad yar, maxaa yeelay waa nabar waana qaadan kartaa dhowr toddobaad ama bilooyin si loo bogsado gebi ahaanba. Hadda waxaad taqaanaa sida jeermiga loogu dilo cirbadda xuddunta!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Sida jeermiga loogu dilo wax ka mudidda xudunta